Taageero si aad u hesho lacag la'aan | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Goynta Porn Tagitaanka Porn Free
Ku noolaanshaha adduunka casriga ah, haddii aad rabto inaad joojiso porn-ka si aad ugu noolaatid cayayaan bilaash ah waxaad u badan tahay inaadan joojin karin isticmaalka laptop, kiniiniga ama taleefanka casriga ah ee aad ku daawanaysay. Waxaad wali u baahan doontaa inaad ugu isticmaasho waxbarashada, shaqada iyo nolosha bulshadaada.
Waxaa jira dhowr xeeladood oo lagu caawiyo.
Had iyo jeer ka biloow inaad ka tirtirto dhammaan pear-ka qalabkaaga. Waxay noqon kartaa qalab, laakiin tallaabadani waxay u direysaa maskaxdaada calaamadda ah in aad rabto inaad bedesho waa birta. Xasuuso inaad tirtirto gadaasha iyo qashinka. Sidoo kale ka takhalus dhammaan jilayaasha si aad u ogaato goobaha ladagaasha iyo sidoo kale taariikhda browser-kaaga.
Haddii aad isticmaalaysay VPN ama Network Private Private Network, waa inay sidoo kale tagtaa.
Alaabta gurigaaga ku wareeji ama isbeddello kale ku samee meesha aad ku daawato galmada. Tilmaamaha deegaanka ee la xiriira isticmaalka waxay noqon karaan kiciyayaal awood badan maxaa yeelay iyagu iyagu waxay sii daayaan daawada loo yaqaan 'dopamine'. Tixgeli inaad ku isticmaasho aaladahaaga internetka kaliya meel aad u yar oo gaar loo leeyahay, oo aanad ku xirnayn isticmaalka sigaarka. Ama u beddel jawigaaga 'booska porn'. Ka takhalus 'kursigaaga siigaysashada' ama si fudud ugu wareeji alaabta gurigaaga.
Ka hortagida porno
Tixgeli xanibaadda lulataaye. Xannibaadayaasha lulataaye ee loogu talagalay ku-noolaanshaha bilaashka ah ee jilicsan maahan caddayn. Waxay u eg yihiin kuuskuus-xawaare. Waxay ku siinayaan waqti aad ku ogaato inaad ku dhaqaaqayso wixii aadan rabin inaad sameyso. Horaantii geedi socodka soo kabashada, kahor intaan farsamooyinka is-xakamaynta maskaxdaada dib loogu soo celin nidaam buuxa oo shaqeynaya, xannibaadayaashu way caawin karaan. Ugu dambeyntii, uma baahnid iyaga.
Dalka Ingiriiska, Bixiyaha Adeegga Internetka (ISP) waa inuu kuu oggolaadaa inaad doorato inaad isticmaasho sawirrada dadka waaweyn si aad u hesho adeeggaaga internetka. Tani waxaa hadda laga heli karaa Virgin Media, Sky, BT iyo TalkTalk. Ka hubi ISP-gaaga. Adeegga joojinta badanaa waa bilaash. Adeegyada xakamaynta looma oggola inay ilaaliyaan dhammaan xayawaanka, laakiin waa inay ahaadaan kuwo ku filan dadka badidooda oo kaashanaya.
Haddii aad ku daawato mobilada mobilka waxaad weydiin kartaa shabakadaada inay ka saarto marinka 'waxyaabaha qaangaarka ah'. Ha ceebayn.
Nidaamyada xayeysiinta casaanka ah ee bilaashka ah ayaa laga heli karaa goobahan:
Taleefanada moobiilka ee shabakadaha sida EE iyo T-Mobile waxay ku xiran yihiin qalab dhisid oo u baahan shakhsiyaadka in ka badan 18 iyo inay isticmaalaan kaararka deynta si ay u helaan waxyaabaha qaangaarka ah. Tani waxay u muuqataa inay si fiican u shaqeyneyso si ay u sii wado waxyaabaha laga hadlayo. La xiriir shirkaddaada telefoonka si aad u hesho caawimaad dheeraad ah si aad u xakamayso nuxurka haddii loo
Caawinaad Helid TRF 3-Tallaabada Qaabka Soo-kabashada >>